Chando chinotenderera machira esimbi Vagadziri - China Cold chakakungurutsa simbi isina tsvina machira Fekitori, Vatengesi
410 410s chando chakakunguruswa simbi isina mahwanda (0.2mm-8mm)
410 simbi isina simbi jira ine simba rakakwirira uye kugona kwakanyanya. Ichaoma mushure mekurapa kwekupisa. Inowanzo shandiswa sechinhu chisina kugadzirwa chekucheka maturusi uye tafura. Inofananidzwa neplate yesimbi isina chinhu ine 410, 410S ine yakaderera kabhoni yezvinhu uye ine nani kutu kurwisa uye kugadzikana.
316L316 Cold Yakakungurutsirwa Isina Simbi machira (0.2mm-8mm)
316L imhando yemolybdenum ine simbi isina simbi. Nekuda kweiyo molybdenum zvirimo musimbi, kushanda kwese kwesimbi iyi kuri nani pane iyo ye310 ne304 simbi isina simbi. Pasi pemamiriro ekupisa akakwirira, apo kusungwa kwesulfuric acid kuri pasi pe15% kana kukwira kupfuura 85%, 316L simbi isina simbi ine huwandu hwakawanda. shandisa. 316L simbi isina simbi zvakare ine yakanakira kuramba chloride kurwisa uye saka inowanzo shandiswa munzvimbo dzemumakungwa. 316L simbi isina chinhu ine yakanyanya kabhoni zvemukati ye0.03 uye inogona kushandiswa mune zvinoshandiswa uko kubvisirwa zvisingaite uye kwakawanda ngura kuramba kunodiwa.